Yini ukuqhuma kwesiphepho futhi kungani kufanele sikhathazeke? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Wake wezwa ngezikhukhula? Ziyinto engaziwa kangako, kepha nokho ingadala umonakalo omkhulu ezindaweni ezisogwini. Zibangelwa ukuphazamiseka kwesimo sezulu okuhlangana nengcindezi ephansi nemimoya, okubangelwa ukunyakaza kwamapuleti etektoni, abangela ukuphakama kolwandle.
Yinto eyingozi kakhulu, ngoba ingadala ukufa kwabantu abaningi kunokuzamazama komhlaba. Empeleni, yimbangela yokufa kwabantu okungamaphesenti angama-90 okushiywe yisiphepho.
Isithombe - uPierre cb
Kunezinqubo eziningana ezibamba iqhaza ekuguqulweni kwamaza: ingcindezi yasemkhathini, umoya, amagagasi, imvula nokujikeleza komhlaba. Ingcindezi yesiphepho idala ukuthi izinga lamanzi likhuphuke ezindaweni ezinengcindezi ephansi futhi lehle ezindaweni ezinengcindezi ephezulu. Kulokhu kufanele kungezwe ukuthi kulezo zindawo lapho amanzi angajulile khona amagagasi ayophakama futhi abe namandla ngokwengeziwe.
Lokhu kukodwa kuyinkinga, kepha ngokusho kocwaningo olwenziwe yi Isikhungo Esihlangene Sokucwaninga se-European Commission (I-JRC, isichazamazwi sayo esiNgisini: Isikhungo Socwaningo Esihlangene) ngo-2100 eYurophu kufanele ngabe sesikulungele, ngoba zingakhuphuka zifike ku-15%.
Ukufudumala kwembulunga yonke kubonakala kusesemuva, njengoba izinga lezilwandle lizoqhubeka nokukhuphuka, futhi kuzoba neziphepho eziningi. Ngakho-ke kuzodingeka thatha izinyathelo ukuvikela izindawo ezisogwini, ikakhulukazi kulawo oLwandle lwaseNyakatho nalawo oLwandle iBaltic, ngoba uma kungenjalo imiphumela ingaba yingozi.
Ukuqhuma kwesiphepho kuyinto okufanele siyinakisise, ngoba ayithinti nje kuphela amazwe anesimo sezulu esishisayo, lapho kuvame khona iziphepho, kepha kungekudala noma kamuva izothinta ezinye izingxenye zomhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Yini ukuqhuma kwesiphepho futhi kungani kufanele sikhathazeke?